8 volana izao no nandaozany RABARISON TIANA NANTENAINA na i « Nanah »ny fianakaviany - Madagascar Informations
8 volana izao no nandaozany RABARISON TIANA NANTENAINA na i « Nanah »ny fianakaviany
17 juin 2016 11 novembre 2016 Madagascar Informations Aucun commentaire
Banga ny fianakaviana kanefa tsy maintsy hatrehana ny fiainana hoy RABARISON TIANA Ray niteraka an’ny Nanah. Tampoka ny fisarahana satria tsy nisy nanampo fa tsy hiverina ao an-trano intsony Nanah raha niala tao an-tranony Alahady faha 10 ny volana Mey 2015. Tokony ho tamin’ny 1 ora tolakandro no nialany tao an-tranony ary nilaza fa hanao famerenana dihy miaraka amin’ny Aina Fetra namany akaiky. Rehefa nigadona ny tamin’ny 7 ora hariva ka tsy mbola tonga tao an-trano izy dia nanomboka ny fikarohana ,nantsoina ny findainy izay marihina fa maneno kanefa tsy misy mandray .
Hatreo mbola nanatena ireo Ray aman-dreny fa tsy maninona I NANAH saingy rehefa nantsoina avokoa ireo namany rehetra dia nanambara fa tokony ho jerena ny kaonty Facebook ka teo no nahalalana fa nifanao fotoana teny amin’ny Mausolée I NANAH sy I Aina Fetra.
Raha araka ny fitantarany rainy hatrany dia efa ela no mpinamana I NANAH sy Aina F saingy tsy fantatra mazava izay nahazo an’ny Aina tamin’io Alahady io satria dia izy no nilaza fa namono nahafaty an’ny NANAH ,tsatok’antsy 6 teo amin’ny tendany no nitarika ny fahafatesany ankoatra ny hitsaka natao teo amin’ny lohany.
Mety ho avotra ihany ny ainy raha voavonjy io Alahady io izy hoy ny Rainy mitantara.
Teo no nanomboka ny famotorana sy ny fanadihadiana ary efa tazonina eny amin’ny fonjany Tsiafahy I Aina Fetra amin’izao fotoana hanoratana izao. Raha tsiahivina dia nanatanteraka ny fanodinana ny clip “Nampitapy Ahy “ 2 andro mialohany nahafatesany I Nanah niaraka tamin’ny tarika Taratra. Taorian’iny voina iny dia efa nivoaka ihany koa ny clip hita anaty you tube rakitsary natao hahatsiarovana azy manokana nampitondraina ny lohateny hoe “Andriampiadanana”.
Hatreto mbola tsy hita ny findainy ary mbola manao antso ny Ray aman-dreniny NANAH ny amin’ny tokony hamerena izany. Azo lazaina ho misy fitavozavozana ihany eo anivony’ireo mpandraraha ara-pifandraisana satria tokony ho fantatra ny toerana misy io finday io. Ny zava mitranga toy izao dia azo hitarafana fa tsy mandeha ny fiaraha- monintsika ,tsy misy fahalala-pomba avy amin’ireo Ray aman-dreniny Aina Fetra minia mikipy manoloana ny zava-misy. Mbola misy ihany koa ny olona ahiahiana ary handeha amin’ity volana Janoary ity ny raharaha eny anivony fitsarana ary mbola fitazonana vonjy maika no hatao an’ny Aina Fetra eny amin’ny fonjany Tsiafahy.
Zazavavy tsotra I NANAH ,mivatambatam-piteny ,tsy mba tia miolakolaka , tsy tia ratsy ,tia namana ,tia mifanakalo hevitra ,mpandray ny fanasany tompo sariaka ary tia fanatanjahan-tena saika hananany avokoa ireo toetra tsara rehetra. Nanangana communauté “ensemble pour NANAH “ ihany koa ny fianakaviana natao hahatsiarovana azy ary fikambanana hiarahana amin’ireo namany
Tsiahivina fa efa nisy hetsika natao ny volana Novambra lasa teo hetsika nantsoina hoe “Marche Blanche “.
Mafy ny fisarahana kanefa tsy maintsy hatrehana ny fiainana hoy ny rainy NANAH mitantara , banga ny tokantrano , ary tsy adino fa miraikitra ao am-po mandrakizay ,tsy maty NANAH fa nifindra toerana fotsiny i ,Kristianina ihany koa ka tsy maintsy mitraka. Izay no tranga niseho tamin’ny fianakaviana TIANA RABARISON ,tokony ho samy ho mailo ny Ray aman-dreny satria tsy kely lalana ny ratsy ,aminy tsy anjara no nahafaty ny zanany fa voina niniana natao.
Natao izao fanadihadiana izao mba hahatsiarovana an’ny NANAH sy ho anatra ho an’ny ho avy indrindra ho an’ny tanora mba tsy hanaonao foana.
← RAPPORT SUR LA STABILITE FINANCIERE N°2, 2014
Madagascar, une grande île … →
Hanolotra seho miavaka eto andrenivohitra – Herbert Léonard
10 décembre 2015 Madagascar Informations 0